को’रोनाले थ’ला परेको बेला फेरी यस्तो ठुलो ब’ज्रपात, यो परिवारलाई भेट्न भाग्य न्यौपाने सहयोग लिएर चितवन पुगे [भिडियो सहित] – Sanchar Patrika
को’रोनाले थ’ला परेको बेला फेरी यस्तो ठुलो ब’ज्रपात, यो परिवारलाई भेट्न भाग्य न्यौपाने सहयोग लिएर चितवन पुगे [भिडियो सहित]
July 14, 2020 180
कति धेरै स’मस्यामा छन् हेर्नुहोस् त कसैलाई रो’ग त कसैलाई भो’कको सम’स्या छन्। सबै आ-आफ्नो स’स्याले थि’चिएका छन् त्यस्तै सम’स्यामा, त्यस्तै पि’डामा, बि’रामी अवस्थामा हुनुहुन्छ चितवनमा एकजना दाजु। उहाँ घर बनाउने ठाँउमा काम गरेर आफ्नो परिवार बुवा, आमा, श्रीमती, सानो छोरि पाल्दै आउनु भएको थियो तर यो लकडाउनको बेलामा कहिँ कतै काम नपाएर खान बस्न स’मस्याबाट गु’ज्रिरहेको बेलामा २/४ दिन लाई काम पाउनु भयो।काम गरेर परिवारको दुई छाक टार्न कै लागि भनेर काम गर्नको लागी जानु भयो तर बिडम्बना, दु’ख’को कुरा उहाँ काम गर्ने क्रममा घरको दुई तलाबाट खस्नु भयो।
परिवारमा कमाउने नै उहाँ एक जना दाइ मात्रै हुनुहुदो रहेछ तर उहाँ नै यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँको घाँ’टी भा’चिएको छ शरीरको न’शा चु’डिएको छ। डाक्टरले मुख्य नशा नै चु’डिएकाले कम्मर भन्दा तलको भाग चल्दैन भन्नु भएको रहेछ। चन्दा उठाएर उहाँको उपचार गराईरहनु भएको छ।
त्यहि खाने कुरा खाएर बस्दै आउनु भएको छ। अनु श्रेष्ठ दिदीले नै त्यहाँ एउटा परिवार यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी दिनु भएको थियो। यति धेरै पि’डा रहेको परिवार लाई भाग्य न्यौपानेले रु.२०००० (बीस हजार) आर्थिक रकम सहयोग गर्नु भएको छ।
लण्डनबाट “मितु राइ” र उहाँको साथीहरु मिलेर पठाउनु भएको सहयोग रकम चितवनका उक्त बिरामीलाई दिइएको छ। मितु राइ दिदि उहाँ स्वयम कोरोना कोभिड-१९ बाट सं’क्रमित हुनुहुन्थ्यो, खुसीको कुरा उहाँले अहिले को’रोना म’हामारीलाई जितेर काम पनि सुरु गरि सक्नु भयो।
कति धेरै समस्या र पि’डामा छन्। सबैको आ-आफ्नो समस्या छ, यति धेरै सम’स्यामा परेका दुखी, पिडितलाई भाग्य न्यौपानको टिम मार्फत सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
Prevफिटकिरीको यसरी प्रयोग गरेर पनि ब’च्न सकिन्छ को’रोनाबाट !
Nextलोकसेवा आयोगमा खुल्यो यस्तो र’हस्य ! यी बाबुको बढुवा र ग्रेड वृद्धि रोक्का, छोरीको सरकारी जागीर चै’ट !
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार घरमै बसी बसी हस्तरेखा रेखा हेरेर भाग्य पत्ता लगाउनुहोस्
साउदीमा हुनुहुन्छ? चार्टर उडानबारे दूतावासको जरुरी सुचना !